संघीयता आयो, दरिद्र सोच बदलौं | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण संघीयता आयो, दरिद्र सोच बदलौं
on: March 22, 2019 लेख | दृष्टिकोण
मुलुकमा संघीयता आयो तर सोच बदलिएन । यसले गर्दा मुलुक द्रुत विकासमा जान सकेन । अरू मुलुकको दौडसँग जानु त परै जाओस्, जुनसुकै सरकार आए पनि सर्वसाधारणलाई खुशीसम्म पार्न सकेन । यसको कारण भनिराख्नुपर्ने विषय होइन । देशमा भत्ता खाने स्वार्थीहरू धेरै भए । राम्रो काम गर्ने कम भए । एक हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो सुन्दर मुलुकमा के खाने के लाउने, के पिउने, कहाँ घुम्ने आदि सबै समस्या छन् । यहाँका मानिस खुशी छैनन् । किन छैनन् त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो भएको छ ।
जब देश चलाउनेहरूले आफ्नो मान्छेलाई मात्र अँगालेर हिँड्छन् जनता निराश हुनु स्वाभाविक हो । देश चलाउनेहरू शक्तिहीन निर्देशन मात्र दिन्छन् । निर्देशनले देश अगाडि बढ्दैन । अहिले हाम्रो देशमा भइरहेको यही हो । नेताहरू निर्देशन दिनुलाई नै ठूलो सफलता सम्झन्छन् । तर, उनीहरू एकअर्कालाई सहयोग गर्दैनन् । उनीहरूमा स्वार्थी भावना छ । उनीहरू कमिशन र भत्ताको पछि दौडिरहेका छन् । मुलुकलाई वास्ता गर्दैनन् । नेताहरूमा थुप्रै गलत संस्कार छन् । त्यही भएर हाम्रो मुलुक पछि परेकोे हो । पहिला द्रुत विकास गरौं अनि मोज गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदै छ भन्ने सोच आइदिए देशलाई निकै फाइदा हुन्थ्यो ।
मुलुकको विकासका लागि गणतन्त्रात्मक संविधान बन्यो । संघीयता संस्थागत हुँदै छ । तर, यसको आधारमा विकास गर्न भने चमत्कार गर्ने व्यक्तिहरू हुनु आवश्यक छ । हाम्रो मुलुकमा घ्यू तेल खाद्य सामान नक्कली भएजस्तै नेता, नीति र संघीयता नै पनि नक्कली भएर त विकास नभएको होइन ? हामी अरू मुलुकको दाँजोमा जान नसकेको कारण के हो त ? त्यसैले विकासका लागि धेरै चिज फेरिसक्यौ । अब मुलुक हाँक्नेहरू तथा हाम्रा संस्कारहरू परिवर्तन हुनु जरुरी छ । देश चलाउनेहरूले हामी सबै मर्नुपर्छ र मर्नुभन्दा अगाडि हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । यसका लागि अनुशासनहीन भएर होइन, लालच गरेर होइन, गफ दिएर होइन साँचीकै परिणाम आउने काम गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जनताको कुरा नसुनेर होइन इमानदार र कडा भएर यो मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्छ । विलासी शौख र आप्mनो मान्छेलाई च्याप्ने संस्कार त्याग्नुपर्छ । यसो भएमा देश विकासलाई कसले रोक्न सक्छ ? देशमा विकासको लहर आए विदेशीको अगाडि हात फैलाउनुपर्ने अवस्था नै आउने छैन । यी कुरा जुन सरकार आए पनि सर्वप्रथम सोच्नुपर्ने कुरा हुन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने देश चलाउने नेताहरू आपूm साधारण बन्नुपर्छ र जनतालाई सुख, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्छ । यसका लागि नेताहरू हुनुपर्ने मुख्य कुरा अनुशासन, इच्छाशक्ति नै हो । नेताहरूले राजनीति आफूलाई बलियो बनाउन होइन, जनतालाई बनाउन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यस्तै आफू धनी बन्ने होइन, जनतालाई धनी बनाउने सोच्नुपर्छ । आफू खुशी हुने होइन, जनतालाई खुशी बनाउने काम गर्नुपर्छ । तर, यसो हुन सकेको छैन ।
विकासका लागि के गर्न सकिएला त ?
सर्वप्रथम कुनै पनि सरकार कडा र इमानदार हुनु जरुरी छ । तर, आजसम्म त्यस्ता सरकार यो मुलुकमा देखा परेका छैनन् । आफ्नो मान्छेबाहेक राम्रा दक्ष भएका व्यक्तिलाई पनि खुल्ला प्रतियोगिता मार्पmत सरकारी कुर्सी दिनु आवश्यक छ । अहिले संविधानमा कतिपय देश चलाउनेहरूलाई मात्र फाइदा हुने कुरा छन् । यस्ता कुरा सच्याउनु जरुरी छ । सरकारले कमजोर प्रदेशलाई पनि देशको अङ्ग ठानेर आँखा लगाउनु जरुरी छ । आफ्नो मुलुकमा जसरी होस् लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले सकारात्मक सोच बनाउनुका साथै स्वार्थी भावना त्याग्न जरुरी छ । अहिले हाम्रो मुलुकमा उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न चाहनेको र रकमको कमी छैन । तर, जमेको धनलाई सञ्चालन गर्ने क्षमता सरकारमा हुनु जरुरी छ ।
यो देशमा विकास चाँडै नहुनुको कारण सत्तापक्ष बाहेक प्रतिपक्ष पनि हो । यहाँ प्रतिपक्ष सत्तापक्षले राम्रो काम नगरोस् भन्ने चाहन्छ । सत्तापक्षलाई ढालेर फेरि आफू सतामा आउने सपना देख्छ । सरकारले गर्ने फजुल खर्च रोक्नुपर्छ । सर्वसाधारणलाई सुविधा दिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म झमेलारहित रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । अनावश्यक कागजात खोज्ने, कर बढी लिने काम पनि रोक्नुपर्छ । यो मुलुकमा पढेका व्यक्ति होऊन् वा अनपढ अल्लारे होऊन्, तिनीहरूमा नैतिकताको अभाव छ । त्यसकारण शिक्षण संस्था, चलचित्र सूचना विभाग आदि जस्ता निकायले यिनीहरूलाई बेलाबेलामा नैतिक शिक्षा दिन अग्रसर हुनुपर्छ ।
मन्त्री वा सरकारी पदाधिकारीहरू औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा विदेश भ्रमण गरिराखेका हुन्छन् । यिनीहरूले त्यहाँका राम्राराम्रा कुरा पक्कै सिकेर आउँछन् । तर, त्यसअनुसार उनीहरूले कहिल्यै काम गर्दैनन् । विदेशमा देखेका कुराहरू यहाँ लागू गर्न खासै ठूलो रकम पनि चाहिँदैन । सामान्य व्यवस्था गरे हुने काम पनि उनीहरूले गरेको पाइँदैन । राम्रा कुराका लागि संघर्ष गरेर हुँदैन, लेखेर हुँदैन भन्ने जुन जनमानसमा नकारात्मक छाप छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ । मानिसको खराब सोच, संस्कार र अन्धविश्वास जस्ता कुरा त्याग्दै जानुपर्छ । यी सबै कुरामा सबैको ध्यान जान सके देशले कोल्टो फेर्न सक्थ्यो ।